An’arivony mivory ao Tbilisi mitaky ny hanafahana ilay filoha teo aloha nogadraina · Global Voices teny Malagasy
Milaza hatrany ny filoha teo aloha fa tratran'ny fanenjehana ara-politika
Voadika ny 23 Oktobra 2021 3:56 GMT
Vehivavy iray tao amin'ny hetsika alakamisy nitazona raozy, manao sariohatra ny revolisiona raozy izay nanaistra an'i Saakashvili teo amin'ny fahefana tamin'ny taona 2003. Saripika: Mariam Nikuradze/OC Media.
Ity lahatsoratr'i Shota Kincha ity dia nivoaka voalohany tao amin'ny OC Media. Mivoaka eto ny endrika nasiam-panovana noho ny fifanarahana hiasa miaraka amin'ny famoaham-botoaty.
Nokarakarain'ny antokon'ny fanoherana lehibe indrindra ao Georgia, ny United National Movement (UNM) tarihin'i Saakashvili ny hetsika.
Nosamborina tamin'ny tapa-bolana ny filoha Zeorziana fahatelo, izay mizaka ny zom-pirenena Okrainiana mitarika ny Komitim-Panavaozana (Fahefana) Mpanatanteraka ao Okraina amin'izao fotoana izao, rehefa niditra an-tsokosoko ho ao Georgia ny alina mialoha ny fifidianana isa-paritra.
Nisisika i Saakashvili niteny fa lasibatra manokana ara-politika izy ka i Bidzina Ivanishvili, mpanorina ny Antoko Nofinofy Zeorziana mitondra amin'izao fotoana, sy ny Filoha Rosiana Vladimir Potinina no mibaiko hanenjehana azy.
Nilaozan'i Saakashvili i Georgia tamin'ny taona 2013 ary nodidiana higadra enin-taona tao amin'ny fitsarana tsy natrehiny izy tamin'ny taona 2018 tamin'ny vesatra maro ho nihoa-pahefana tao Georgia. Tsipahin'ny filoha teo aloha ny fiampangana.
Farafahakeliny famonjana enin-taona no atrehiny amin'ireo vesatra maro tahaka ny baiko hanafika ilay mpifanandrina politika Valeri Gelashvili sy ny fampanantenana tsy ara-dalàna hamela ny helok'ireo mpampihatra lalàna voarohirohy tamin'ny famonoana an'i Sandro Girgvliani tamin'ny taona 2006.
Nanetsika ny mpanohana azy manerana ny firenena ny UNM, ka maro ireo tonga nandeha fiara manokana ho ao an-drenivohitra. Notsenain'ny vondrona maro mpanohitra ny fihetsiketsehana mitazona kifafa ry zareo, ka ny sasany amin'ireny mitoraka izany any amin'ny fiara sady manompa an'i Saakashvili.
Milaza ny mpitarika ny UNM fa nahetsiky ny mpitondra ao an-toerana ao anatin'ny antoko mitondra ireny vondrona ireo sy mpiasam-bahoaka.
Nianjonan'ny vondrom-panoherana hafa
Raha nikiry amin'ny UNM milaza fa antoko maro no manao fihetsiketsehana ary “nasionaly” ny fitakiana, dia tsy noraharahian'ny vondrompanoherana hafa ny fotoana.
Raha tenenin-dry zareo fa hiatrika fitsarana tsy ara-drariny i Saakashvili eo ambany governemantan'ny Nofinofy Zeorziana, dia tsy nety hanatevin-daharana ny hetsika eny an-dalambe ny vondrom-panoherana Georgia Eoropeana, Lelo, Strategy Aghmashenebeli (fantatra vao haingana ho Fahefana Fahatelo), ary ny Antoko Repoblikana.
Misy ireo nanoritra fa tokony mbola ny fifidianam-paritra fihodinana faharoa kinasa hotanterahana amin'ny 30 oktobra no ifantohana. Misy ihany anefa ireo mpitarika maro ao amin'ny fanoerana no nanapa-kevitra ny hanatevin-daharana amin'ny anaran'ny tenany manokana toa ny mpitarika ny antoko Droa sady mpikambana taloha tao amin'ny UNM, Elene Khoshtaria.
Amin'ny fihodinana faharoa amin'ny fifidianana monisipaly, dia hifanandrinan'ny antoko mitondra amin'ny hafa avokoa ireo tanàna mahazaka tena miisa dimy.
Ny antoko Georgia, tarihan'ny praiminisitra teo aloha Giorgi Gakharia, indray nihataka lavitra ny lanonana mihoatra ny hafa amin'ny fitsipahana ny fiheverana fa misy ambadika politika ny fanagadrana an'i Saakashvili.
Khinkali iray ihany
Taorian'ny nihazonana azy hatramin'ny 1 oktobra, namoaka fanambaràna maro hamelezana an'i Saakashvili ny praiminisitra Irakli Gharibashvili, tafiditra amin'izany ny vesatra fanampiny ara-media azo amelezana azy, izay mahatonga tsikera na eo an-toerana na amin'ny sehatra iraisampirenena sy mampanontany tena amin'ny fahafahan'ny rafi-pitsarana ao Georgia mametraka fitsarana ara-drariny ho an'ny filoha teo aloha.
Raha mampanantena ny hitadiavana izay hampodiana azy ho ao Okraina ny manampahefana Okrainiana, dia nitatitra ny seha-baovao ao an-toerana Ukraynsy Novini fa raha ny tamin'ny 14 oktobra, dia tsy mbola nanao fangatahana ny hampodiana azy ho any Okraina ny Biraon'ny Lehiben'ny Fampanoavana ao Okraina.
Mbola tsy mazava ny fomba nitsofohan'ny filoha teo aloha ho ao Georgia.
Taloha sy taorian'ny nihazonana azy, nanadala ny manampahefana Zeorziana i Saakashvili amin'ireo sary navoakany tao amin'ny pejiny Facebook mampiseho azy ho ao Batumi ary eny fa hatramin'ny hoe teo anoloan'ny Lapan'ny Antenimiera ao Tbilisi.
“Nikomandy Khinkali iray aho talohan'ny nisamborana ahy. Indrisy, iray ihany no noezahiko nohanina,” hoy ny hanihanin'i Saakashvili tamin'ny antsafa an-tsotra farany nifanaovany tamin'ny fantsom-pahitalavitra Mtavari.
“Maniry ny fahafahan'i Mikheil Saakashvili izahay. Ankehitriny izy malalaka kokoa noho izahay!,” hoy ny nolazain'i Gigi Ugulava, tompon'andraikitra ambony tao amin'ny UNM taloha, mifaninana ho Ben'ny tanànan'i Poti amin'izao fotoana izao, nandritra ny hetsi-panoherana indray alakamisy.
“Indray andro, 18 taona lasa izay, nisotro dite izy izay nanova ny tantaran'ity firenena ity,” hoy ny nolazainy hanondroana ny nisotroan'i Saakashvili dite tao amin'ny biraon'ny filoha Eduard Shevednadze tamin'izany fotoana izany rehefa nandravarava ny parlemanta ny mpanao fihetsiketsehana tamin'ny taona 2003.
“Ankehitriny izy tsy navela hihinana khinkali. Ho afa-mihinana ny khinkali-ny ihany izy ary potipotiny sisa no ho anay. Satria tsy mendrika hahazo hafa ianao,” hoy i Ugulava.
Heverina handalo eny amin'ny fitsarana i Saakashvili amin'ny volana manaraka amin'ireo vesatra maro iampangana azy, ao anatin'izany ny fiampitana sisintany tsy ara-dalàna.
Arahan'ny Mpisolovavam-panjakana Zeorziana Nino Lomjaria, izay vao nitsikera ny manampahefana tamin'ny tsy fanajana ny fiainana manokan'i Saakashvili tamin'ny famoahana amin'ny antsipiriany ny toe-pahasalamany ny fihazonana ity filoha teo aloha ity.